Chelsea oo wajahaysa dhibaato, Maurizio Sarri oo la ogaaday inuu maalinkii cabo 80-xabo oo sigaar ah iyo Blues oo qaadaysa tilaabtaan!! – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka Liverpool iyo West Ham ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
“Cunsuriyada ayaa guuleysatay” – Antonio Rüdiger oo hadallo carro leh ka dhawaajiyay
Halyeey hore kooxda Liverpool ah oo ka hadlay suurtogalnimada uu Van Dijk ugu biiri karo Real Madrid iyo Barcelona
Chelsea oo wajahaysa dhibaato, Maurizio Sarri oo la ogaaday inuu maalinkii cabo 80-xabo oo sigaar ah iyo Blues oo qaadaysa tilaabtaan!!
Liibaan Fantastic July 23, 2018
(London) 23 Luulyo 2018 Chelsea ayaa wajahaysa dhibaato badan kadib markii la xaqiijiyay in tababarehooda cusub uu si xad dhaaf ah u isticmaalo sigaarka.
Maurizio Sarri ayaa caan ku ahaa inuu sigaar ku dhex cabo xarunta tababarka ee kooxda Napoli, wuxuuna si maalinle ah u cabaa 80-xabo oo sigaar ah 24-kii saac.
Laakiin arinkaan uma suurogalayso inuu ku sameeyo gudaha Ingiriiska haddii aan la helin xal kale, 2006 ayaa la soo saaray sharci lagu mamnuucayo goobaha dadka isugu yimaadaan in lagu cabo sigaar.
Goobaha laga mamnuucay waxaa kamid ah garoomada kubadda cagta, sidoo kale garoomada tababarka ee kooxaha ingiriiska waxaa mamnuuc ka ah in sigaar lagu cabo, waana wax ka hor imaanaya dhaqanka tababare Maurizio Sarri.
Chelsea ayaa qaadaysa tilaab ay ku xalinayso arinkaas, kooxda ayaa qorshaynaysa inay qol gaar ah xarunta tababarka uga dhisto tababare Maurizio Sarri kaas oo loogu talo galay kaliya inuu ku cabo sigaarka waqtiga uu joogo halkaas.
Blues ayaa arinkaan ka soo minguurisay kooxda horyaalka Germany ee RB Leipzig oo xiliciyaareedkii hore qol gaar ah u samaysay tababare Sarri xili Napoli iyo RB Leipzig ay isku arkeen Europa League.
Neymar Jr oo ka saaray Cristiano Ronaldo kooxdiisa Riyada ee ka kooban 5 ciyaatoy oo kaliya
"Musuqmaasuq"…Diego Maradona oo dib u weeraray xiriirka kubada cagta dalka Argantina